JMJ ANY MAHAJANGA :: Ampirisihana hanome vahana ny fitiava-namana ireo tanora • AoRaha
JMJ ANY MAHAJANGA Ampirisihana hanome vahana ny fitiava-namana ireo tanora
“Aza matahotra ry Maria fa sitrak’ Andriamanitra ianao”. Nanomboka omaly hariva, tany amoron-drano­masin’i Mahajanga ny fihaonam­ben’ny tanora katôlika maneran-tany na Jmj andiany faha-9. An’alina ireo tanora avy amin’ny Diosezy miisa iraika amby roapolo no miatrika izany.
Nitarika ny lamesa nano­kafana ny hetsika, omaly, ny Arsevekan’Antsiranana, Monsenera Ramaroson Benjamin. Nisongadina tamin’ny hafatr’ireo Eveka nandray fitenenana ny fampi­risihana ny tanora ho tia ny namana sy tsy ho menatra fa hijoro hatrany amin’ny finoa­na sy ny fitiava-namana.
Isan’ireo voalaza tamin’ ny hafatry ny Papa Ray masina, François ho an’ireo tanora miatrika ity Jmj ity io fiainam-pinoana io. Nolazainy fa misy fifandraisany amin’ Andriama­nitra ny tanora noho ny finoana izay noraisiny. Ny Evekan’Antsirabe, Monsenera Ranaivomanana Philippe, filohan’ny vaomie­ran’ny Apostola laika eo anivon’ny Fivondro­namben’ ny Eveka dia nampirisika ny tanora haneho hatrany izany finoana izany tamin’ny fandraisam-pitenenany. Ankoatra ny vavaka dia hisy ny fampianarana isan’andro homen’ireo Eveka ho an’ireto tanora katôlika any Mahajanga ireto. Nanipy teny momba izany ny Monse­nera Rakotondrajao Victor, Evekan’i Mahajanga tamin’ireo tanora hoe : “Izay fampianarana azonareo avy amin’ireo Eveka dia natao hanandratra ny finoana. Mampirisika anareo hampiseho hatrany ny fitiava-namana tena izy fa tsy ilay ataon’ny mpanao pôlitika”, hoy izy.
ROCK MAVESATRA :: Hifandona etsy amin’ny Dôme RTA ry Iniah sy Allkiniah